कोरोनाका कारण गुमाउन सक्छ श्रवण शक्ति ! नयाँ लक्षणले बढायो चिन्ता -कोरोनाका कारण गुमाउन सक्छ श्रवण शक्ति ! नयाँ लक्षणले बढायो चिन्ता -
होमपेज / उज्यालो फोकस TOP STORIES
कोरोनाका कारण गुमाउन सक्छ श्रवण शक्ति ! नयाँ लक्षणले बढायो चिन्ता
२८ आश्विन २०७७, बुधबार १७:२३ मा प्रकाशित
काठमाण्डौ । कोभिड-१९ को कारण व्यक्तिले श्रवण शक्ति सदाको लागि गुमाउन सक्छ । बेलायती विज्ञहरूको भनाइ छ कि यस अचानक समस्यालाई द्रुत रूपमा पत्ता लगाउन र उपचार गर्न आवश्यक छ । उनले भने कि कोरोना भाइरसले शरीरलाई असंख्य तरिकामा असर पार्छ, परीक्षण गुमाउनुबाट गन्धको क्षतिबाट विभिन्न अंगहरूलाई हानी हुन्छ ।
डाक्टरहरूले प्रमाणहरू भेट्टाए कि कोभिड-१९ ले एक व्यक्तिको श्रवण शक्तिलाई बेकार बनाउन सक्छ । युनिभर्सिटी कलेज लन्डनको ‘जर्नल बीएमजे’ मा प्रकाशित एउटा रिपोर्ट अनुसार ४५ वर्षीय कोवभिड्-१९ संक्रमित व्यक्तिलाई आईसीयूमा (इन्टेन्टिभ केयर युनिट) राखिएको थियो।
दमबाट पीडित बिरामीलाई एन्टि भाइरल ड्रग रेमेडिसवीर र इन्ट्राभानस स्टेरॉइड्स दिइयो ।
आईसीयू छोडेको एक हप्ता पछि बिरामीको कानमा एक अनौंठो घण्टीको आवाज आउन थाल्यो र पछि सुन्ने शक्ति बाँया कानबाट गयो। यो घटना पछि, डाक्टरहरूले तिनीहरूको व्याख्यामा भने, ‘बिरामीको कानमा कुनै समस्या थिएन । तसर्थ, उसलाई कुनै औषधि दिइएन जसले उनको सुनुवाईलाई असर गर्यो।
थप अनुसन्धानले पत्ता लगायो कि बिरामीलाई फ्लू वा एचआईभी पनि थिएन । त्यसैले त्यहाँ श्रवण हानिसँग सम्बन्धित स्वत: प्रतिरक्षा समस्याको कुनै संकेत थिएन। यस बाहेक, सम्बन्धित व्यक्तिले पहिले सुनुवाईसँग सम्बन्धित कुनै समस्या भएन।
त्यसपछिको परिक्षणमा, यो पत्ता लाग्यो कि बिरामीको बाँया कानमा ‘सेन्सोरियल हिअरिङ लस’ रहेको छ ।
बेलायतमा यस्तो मात्र घटना भएको छ । यद्यपि अन्य देशहरूको तुलनामा थोरै घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको छ। “कोभिड्-१९ ले श्रवण शक्तिलाई कसरी क्षति पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन, तर यसको सम्भावना पनि छ,” अध्ययनका सह-लेखक डा. स्टेफनिया कौम्पा भन्छिन्।
डा. कोम्पाले भने, ‘यो सम्भव छ कि सार्स-कोभ -२ भाइरसले कानको भित्री कोषहरूलाई बिगार्न सक्छ र यसलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ वा कानमा विषाक्त शरीरमा साइकोकिन्स भनिने एक इन्फ्लेमेटरी रसायनको रिलीज गराउन सक्छ। यो सम्भव छ। ‘ उनीहरूले भने कि स्टेरोइडले भडकाउने रसायन वा साइटोकिन्सको उत्पादन सम्भावना कम गर्न मद्दत गर्दछ।
अनुसन्धान टोलीले भनेको छ कि कोभिड-१९ बिरामीलाई आईसीयूमा कानको समस्याको बारेमा सोधेको हुनुपर्छ र आपतकालिन उपचारको लागि पठाइनु पर्ने थियो। डा. कौम्पाले भने, “एक कानले सुन्ने शक्ती गुमाउनाले व्यक्तिको जीवनमा ठूलो असर पार्छ।”
म्यान्चेस्टर विश्वविद्यालयको अडियोलोजी प्रोफेसर केभिन मुनरो यस अनुसन्धानको हिस्सा थिएनन्। तर उनले बताए कि दादुरा वा गल्फुलो (कुनिफर) जस्ता रोगहरूको लागि जिम्मेवार भाइरसले कानलाई हानी पुर्‍याउँछ । उनले भने कि उनको टोलीसँग एडमिट कोभिड-१९ का बिरामीहरुको सर्वेक्षण अस्पतालमा गरिएको थियो। सर्वेक्षणमा १२१ मध्ये १६ जना बिरामीलाई दुई महिनाको डिस्चार्ज भएपछि सुन्ने समस्या भएको पाए। मुनरोले भने कि उनको टोलीले अहिले यो समस्याको कारण पत्ता लगाउन कोशिस गरिरहेको छ।
प्लास्टिकको बोतलबाट दुध खुवाउनु बच्चाका लागि हानिकारक : अनुसन्धान
नेकपामा कर्णाली विवाद : बालुवाटार र खुमलटारको दुई छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिले के बुझ्ने ?
कोरोना विरुद्धको तेस्रो खोप पनि बनाएको रूसको दाबी (पढ्नुहोस पुरा जानकारी)
कोरोना खोप लगाउने मानिस बाँदर बन्न सक्छ ? रूसमा भाईरल भइरहेको छ् फेक म्यासेज
सच्चिएनन् ओली ! एकपछि अर्काे ‘एकलौटी निर्णय’ले नेकपामा विवादै–विवाद [समाचार टिप्पणी]
यो हो, प्रधानमन्त्रीले ईश्वर पोखरेलको मन्त्रालय खोस्नुका तीन कारण